Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa Itoophiyaa filannoon biyyaaleessaa akka taasifamu murteesse – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsManni Maree Bakka Bu’oota Ummataa Itoophiyaa filannoon biyyaaleessaa akka taasifamu murteesse
HOUSE OF PEOPLES REPRESENTATIVES OF FDRE
Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa walgahii har’a, Kibxata, taa’een filannoon Biyyaalessaa 6ffaa sababa weerara koronaavaayirasiin yeroo hin beekamneef darbee ture akka taasifamu murteesse.
Dabalataan, weerara Covid-19 to’achuuf jecha sochiiwwan dhorkamanii turan akka eegalan akkasumas manneen barnootaa cufamanii turan akka banaman Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa har’a murtesseera.
Qophiin filannoon akka taasifamu murtaa’u malee filannoon yoom akka ta’e hin ibsamne. Kana dura MM Abiy Ahimad mootummaan filannoo biyyaalessaa ALI bara 2013 keessa gaggeessuuf yaada akka qabu dubbatanii turan.
Manni marichaa akka beeksisetti filannoon biyyaalessaa jahaffaa yaada Dhaabbanni Fayyaa Addunyaafi Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa kaa’aniin akka taasifamu gabaasnifi yaadni murtee dhihaateera.
Yaada kana kan dhiheessan Walitti qabduu Koree Dhaabbii Dubartootaa, Dargaggootaafi Hawaasummaa kan ta’an Aadde Ababaa Yooseefiini.
Yaada dhihaateerratti yaada dhaabbilee fayyaa kennan hordofuun filannoon taasifamuu akka danda’u ibsa.
Yaadni dhihaate kunis mormii tokkoofi namoonni saddeetimmoo sagalee osoo hin kenniin hafanis sagalee caalmaan ragga’eera.
Manni maree bakka bu’oota uummataa Itoophiyaa walgahii arifachiisaa torban darbe Fulbaana 08 bara 2013 taa’en gabaasa fi yaada Ministeerri Fayyaa haala dhibee Covid-19 irratti dhiyeesse dhaggeeffachuun isaa ni yaadatama.
Ministirri Fayyaa Dr Liyaa Taaddasaan yeroos of eeggannoodhaan filannoon taasifamuu akka danda’u yaada dhiheessanii turan.
Yaadni kunis akka ilaalamuuf Koree Dhaabbii dhimma hawaasummaatti akkasumas Koree Dhaabbii Seera, Haqaafi Dimookiraasiif erga ergamee booda har’a paarlaamaatti deebi’e ragga’e.
Yaada Ministeerri Fayyaa dhiheesse hordofee torban darbe yaada isaanii BBC’f kan kennan paartileen siyaasaa filannoo dura haal dureewwan guutamuu jiru jechuun dubbataniiru.
Sadarkaa biyyaatti filannoon biyyaalessaa yeroo biraatti darbus murtee kana darbuun Naannoon Tigraay filannoo addatti gaggeeffateera.
Filannoo paartiin naannicha bulchaa ture, TPLF, olaantummaan xumure kanarratti paartileen gaaffii kaasuun irratti hin hin hirmaanne turani.
Filannoon biyyaalessaa sababa weerara Covid-19 yeroo biraaf darbee aangoon mootummaa dheerachuu mormuun paartileen siyaasaa mormituu ‘furmaata siyaasaa’ gaafatan turani. Garuu, mootummaan kana hin fudhanne.
Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa booda qondaaltonni siyaasaa olaanoo hokkara uumuun himataman mootummaan ‘filannoorraa nu hambisuuf kana gochaa jira’ jechuun himatu.
Faallaan MM Abiy yaada isaanii Barruu beekamaa The Ikonomist jedhamuurratti katabaniin riifoormii bulchiinsi isaanii gaggeessu kan morman kanneen waldhibdee sabaafi amantiirraa buufataniidha jechuun himu.
Gama biraatin qondaaltota mootummaa olaanoo Ministirri Muummee Abiy Ahimad muudan guyyaa har’aa Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa raggaasiseera.
Kunneenis, Ministira Raayyaa Ittisa Biyyaa Dr. Qana’aa Yaadataa, Abbaa Alangaa Waliigalaa Dr. Geediyoon Ximotiyoos, Ministira Saayinsii fi Barnoota Olaanoo Dr. Saamuel Hurqaatoo akkasumas Ministira Albuuda fi Boba’aa Injinar Taakkala Uumaa dha.
Kanaan alas, abbootiin seeraa mana murtii olaanoo 40 fi abbootii seeraa mana murtii sadarkaa jalqabaa 50 sagalee caalmaan muudamuun sirna kakuu raawwataniiru.